दैनिक कति नुन खाने ? बढी वा कम हुँदा आउन सक्छन् यस्ता समस्या « Pen Nepal
दैनिक कति नुन खाने ? बढी वा कम हुँदा आउन सक्छन् यस्ता समस्या
Published On : 31 August, 2020 2:41 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । बढी नुन खानु स्वास्थ्यका लागि निकै व्यफाइदा जनक हुन्छ । धेरै नुन सेवन गर्दा मानिसलाई विभिन्न रोग पनि लाग्छ सक्छन् । धेरै नुन खाँदा खानाको स्वाद मात्रै बिग्रीदैन, ब्लड प्रेसर बढ्नुका साथै मुटु सम्बन्धि थुप्रै घातक रोग लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यदी धेरै नुन खानु खाए क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगको जोखिम पनि बढ्छ ।
मान्छेले आफूले दिनमा कति नुन खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा पु¥याउँछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय खाने कुरामा नुनको मात्र बढी हुन्छ । त्यस्ता खानेकुराले स्वास्थ्यमा असर पु¥याउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले खाने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
दिनमा व्यक्तिले दिनमा २,३०० मिलिग्राम नुन सेवन गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । यो पनि बढी नुन सेवन गर्ने व्यक्तिका लागि बढी उपयुक्त हो । तर, सामान्य मान्छेका लागि १,५०० मिलिग्राम भन्दा बढी नुन सेवन गर्नु उपयुक्त मानिदैन ।
हामी नुनको सेवनमा ध्यान दिँदैनौ र हाई ब्लडप्र्रेसरको सिकार हुन पुग्छौं । नुन बढी सेवन गर्दा मुटु सम्बन्धि रोग बढ्ने खतरा हुन्छ । बढी नुन सेवन गर्दा डिहाइड्रशनकाके समस्या पनि हुने सम्भावना हुन्छ ।
स्वास्थ्यमा सोडियमको मात्रा बढी हुन्छ । तर, यो मात्रा आवश्यकता भन्दा बढी भयो भने यसले शरीरमा थुप्रै नकरात्मक असर गर्छ । त्यसैले डाक्टरले कम नुन खाने सुझाव दिनेगर्छन् । यदि आहारामा सोडियमको मात्रा बढी भयो भने ब्लडप्रेसर हाई हुने समस्या हुन्छ ।
शरीरमा नुनको मात्रा बढी भए रक्त प्रवाह बढ्छ । यसले मुटु र धमनिमा अतिरिक्त दवाव दिएर स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पुगाउँछ । धेरै नुन खाँदा हर्टअट्याकको सम्भावना पनि हुन्छ । धेरै नुन खाँदा मिर्गौलाको पत्थरी हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।
बढी नुन खाँदा पिसावमा क्याल्सिएमको मात्रा बढ्छ । क्याल्सिएमको मात्रा बढी भयो भने मिर्गौलाको पत्थरी हुने सम्भावना हुन्छ । यदि मिर्गौलामा पत्थरी भयो बुझ्नुस् की तपाई बढी नुन सेवन गर्नुहुन्छ । बढी नुन सेवन गर्दा मोटोपन बढ्छ । त्यसैले हामीले सधै नुन खाँदा सम्मेमितता अपनाउनु पर्छ ।